Isondlo esifanelekileyo kunye nemilenze ye-varicose
Iimvumba ze-Varicose enye yeentlobo zeemvini. Ngokuqhelekileyo kubonakaliswe kwandiso lwe-sack-like, kwenyuka ubude kunye nokubunjwa kwe-gyri kunye neengqungquthela. Ngokuqhelekileyo, iintsholongwane ze-varicose zithintela imithanjeni yemilenze kunye ne-rectum. I-esophagus kunye netambo yokutya yinto encinane.
Iimvumba eziqhelekileyo ze-varicose ngabafazi. Izizathu zokuphuhliswa ziquka ubuthathaka obuncinci bodonga olusenyakatho, ukungaqhelekanga kwe-vascular, ukwehluleka kwevenge, kunye nokutshintsha kwintambo ye-muscular layout. Ngokuqhelekileyo, imivimbo ye-varicose ibonakala kubantu ababenemisebenzi yabo enxulumene nomsebenzi onzima. Kwakhona, eso sifo sinokulinda abantu ababenemisebenzi enxulumene nokuhlala ezinyaweni zabo - abalungisi bezinwele, abathengisi, abaqhubi, oogqirha ...
Ngeemvumba ze-varicose, kubaluleke kakhulu ukutya ngokufanelekileyo, ukuze kungabangeli ukuphuhliswa kwesifo ngakumbi. Akunangqiqo ukuba uqaphele ukuba i-varicosis ivela kubantu abanomthwalo obunzima. Kubalulekile ukunciphisa ubunzima, ngoko ke, kunye nesondlo esifanelekileyo. Ngenxa yoko, isondlo esiboniswe ngokulahleka kwesisindo, kuya kuba luncedo ekulwa nemilanjeni ye-varicose. Ukukrazula imbonakalo yesi sifo iziphakamiso ezilandelayo ziza kunceda:
Yidla amaninzi ngamaxesha ngeziqhamo;
Ukuphelisa ushukela kunye ne-confectionery apho ikhoyo khona;
Ungabandakanyi kwi-tea eqinile kunye nekhofi;
Ukunciphisa ukusetyenziswa kwezilwanyana ngexesha lokulungiselela ukutya;
Ukwandisa ukutya kwakho kokutya okulawulwa ngamavithamini C no-E.
Ukutya okufanelekileyo kunye ne-varicose akuthethi nje ukunciphisa ukusetyenziswa kwamanye amaqela okutya, kodwa kwakhona ukuzaliswa komzimba kunye nenani elaneleyo lezondlo. Cinga ngamagqabantshintshi awona mandla anceda ukuqinisa iinqanawa, ukuthintela ukubunjwa kwamacandelo egazi, kwaye kwakhona ukulungelelanisa iinkqubo kwinqanaba le-micro-cerebrovascular level.
URutin - unceda ukubuyisela ukunyaniseka kwemithambo yegazi, kuncitshiswe ulwaphulo kunye nokuphelela kwamaplasilla. Ngokubunjwa kwesondlo sakho esifanelekileyo, i-rutin inokufikelela kwisiqhamo se-dog rose, amajikijolo e-currant emnyama, i-ash ash, i-citrus, kunye ne-tea ehlaza.
I-Exusan yilungiselelo eliqulethwe yinkqayi yeehashe ze-chestnut kunye ne-thiamine hydrochloride. Itholakala kwimbewu yokutya, ibhontshisi, inyama, kunye nesilwanyana. Isondlo esifanelekileyo kwisondlo kunye nale nkunkuma yandisa ithoni yeenqanawa ezinobungozi, iqinisa iindonga zeemvini, ize ivuse intlungu.
I-Pantothenic acid iyimfuneko kuthi ngenxa yeenkqubo ezininzi zeekhemikhali ezenzeka emzimbeni. Imithombo yombandela - iifotyi, isibindi, ingqolowa, imvubelo ye-brewer, ihluma ye-okusanhlamvu, i-yolk yolanga, i-bran, i-broccoli, inkukhu.
I-ascorbic acid (i-vitamin C) yinto eyimfuneko kakhulu emzimbeni. Ukuba unamaxesha amaninzi okuphilisa, izibhamu zibonakala lula, ukuba unomdla wokubanda kakhulu, ukhononda ngobuthakathaka, ulungele ukudandatheka, ukuphelelwa ngumdla, - umzimba awukho i-ascorbic acid.
I-Retinol inoxanduva lokukhula nokuphuhliswa kwamathambo, kuqinisekisa ukugcinwa kweeseli ze-epithelial. Egcinwe kwisibindi, iinqotyi, i-melon, isipinashi, ithanga, iklabishi, i-apricot esitsha, ubisi. I-retinol ayikwazi ukugqithiswa ngaphezulu! Ngoko ke, ugqirha ngamnye kwisinye isiguli uya kukhetha umthamo wakhe ekudleni.
I-Tocopherol iyimfuneko ukukhusela umzimba kwiibhaktheriya kunye neentsholongwane, ikhusela i-membranes yeseli. Imithombo i-oyile yemifuno: i-sunflower, ingqolowa, ikotoni; kunye nama-alimondi, imbewu yelanga, i-margarine.
Yidla ukutya okulungileyo kwaye uza kunceda umzimba wakho!
Iziphakamiso ezingama-20 zokulahleka kwesisindo
Imveliso eyona nto iluncedo kwisisu
Isondlo esifanelekileyo kwesikhumba esihle
Indlela yokukhulula iimfuno zobuxoki
Ungadla njani ukuze ube nobisi oluninzi lwebele?
Iipropati ezisetyenziswayo zamagqabha
Ibhotela: inzakalo, inzuzo, isiqhelo
Iintlanzi zezityalo zemihlobiso
Indlela yokukhulisa umntwana ongaphanga
Soup du Barry
Iipropati zokukhawuleza ze-nettle
Ukuhlamba iinwele ngeviniga
Indlela yokulungiselela i-rose ebusika
Izakhiwo zonyango ze-chicory
Kuze kube ziphi iziko eziphambili zomntwana ezenziwe?
Indlela yokufumana indawo yeflethi ngeFeng Shui
Indlela yokulahla amanqatha emilenzeni? Imithetho ebalulekileyo.
Iloli yensikazi okanye iindlela zokubamba umntu
Iibhontshisi zokwakha: iintlobo, indlela yokukhetha, ukunakekelwa
Izifo zesibindi kunye nesondlo sezigulane zesibindi
ETurkey ngelayisi kunye nemifuno